Amazwe ayi-100% anokuphinda ahlaziywe ngo-2017 | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Amazwe ayi-100% ahlaziyiweyo
UTomàs Bigordà | | IBiomass, Amandla omoya, amandla ombane, Umoya ovuselelekayo
Kula mazwe, ukusetyenziswa ngamandla kwamandla ahlaziyekayo asiyonjongo ekufuneka ifezekisiwe, kodwa kukufumana impumelelo. Ukwenza eyona yakho zendalo Amanye amazwe enze iphupha lokuba ne-2017% yomthombo wamandla ahlaziyiweyo azaliseke ngo-100.
Amazwe amane aqhuba kakuhle kakhulu Umba wamandla ahlaziyekayo, Ukubonelela ngezifundo zamandla kuqoqosho olukhulu, oko kukuthi, ukuvelisa zonke iimfuno zabo ngamandla "aluhlaza".
1.1 Umoya ovuselelekayo
2 icosta Rica
Elokuqala kula mazwe yiUruguay.NgoSeptemba 14, ilizwe loMzantsi Merika lafumana phantse iiyure ezingama-24 zokuvelisa ukusuka kumoya, i-hydroelectric, i-biomass kunye namandla elanga.
Urhulumente weli lizwe ubalaselisa ukuba kule minyaka mi-6 idlulileyo i-Uruguay i-invernt ngaphezulu kwama-22 ezigidi zeedola kumandla ahlaziyekayo okuzinzileyo, ukoyisa ngale ndlela ukuxhomekeka kwayo kwioyile nakwigesi.
URamón Méndez, uMlawuli weSizwe wezaMandla kunye nomququzeleli wesicwangciso seminyaka engama-25, ethi ukusukela ngo-2008 ifuna ukuguqula Imveliso yamandla eUruguay, "Siza kuba namaxesha amaninzi apho ukuya kuthi ga kwiipesenti ezili-100 zombane esiwusebenzisayo e-Uruguay ziya kuba yimvelaphi yomoya".
Eli lizwe lincinci elinabemi abazizigidi ezi-3,3 sele lithathe ithuba elipheleleyo lemilambo yalo yokuvelisa umbane ophehlwa ngamanzi kwaye ebesoloko etyale imali rhoqo ngonyaka isi-3% seGross Domestic Product (GDP) kuhlaziyo lwesakhiwo ukufezekisa ulawulo lwamandla kwiminyaka yembalela kunye ukunciphisa ukunyathela kwendalo.
Ngokuka-Méndez, "Kuwo onke amandla asetyenziswa yi-Uruguay, malunga ne-50% isekwe kumandla ahlaziyekayo, kwaye kwicandelo lombane kwi-2015 ngaphezulu kwe-90% izakuvela kumandla ahlaziyekayo."
Ukuba sijonga ingxelo evela kwiNgxowa-mali yeWorld Wide yeNdalo (WWF ngesiNgesi), Costa Rica, Uruguay, Brazil, Chile kunye neMexico zikhokelela kwimizamo yoku tshintsha iparadigm kwaye ukhethe amandla ahlaziyekayo endaweni yezibaso ezinjengeoyile kunye namalahle.
Xa iCosta Rica yaqala ukuthetha ngamandla acocekileyo ngaphezulu kweminyaka engama-30 eyadlulayo, kwabonakala ngathi kuyadlala, kodwa akuzange kuthathe xesha lide ukuba abanye bakope amanyathelo ayo. Kude kube ngoku, ilizwe elaziwa njenge UMbindi Merika waseSwitzerland, uqalile ukuvuna impumelelo enkulu ngaphaya kwezithembiso kunye neenjongo ezintle.
ICosta Rica iqhubela phambili ngokuthe ngcembe ukuba ibe lilizwe lokuqala leLatin American elihlaziyiweyo eli-100%, lisebenzisa izibonelelo zombane, umbane wobushushu, ilanga kunye nezixhobo zebhayomass.
Ingxowa-mali yeWorld Wildlife (WWF) ibonakalisa ukuba ilizwe lisondele ekufikeleleni elitsha Imbalasane Kwimbali yayo yamandla: ukuba lilizwe lokuqala kwiLatin America inikwe amandla yi-100% yamandla ahlaziyekayo.
Ukuba ingxelo ihlalutyiwe, i-WWF ibonisa ukuba iCosta Rica inamandla angama-223.000 eigigawathi ngonyaka we-hydroelectricity, apho ngaphantsi kwe-10% kuyaxhatshazwa, kwaye inomthamo omkhulu wokuvelisa ubushushu kunye nobushushu. "Yeyona paradesi yamandla ihlaziyiweyo inkulu kuMbindi Merika."
Ukongeza, urhulumente uzibekele usukelo lokufezekisa uqoqosho lwekhabhoni olungathathi hlangothi, kwaye ngenxa yoko ukhethe ukufikelela kwi-2021 ngokusetyenziswa kwamandla isekwe ngokupheleleyo kwimithombo enokuhlaziywa.
Ngo-1998 kwavulwa umzi-mveliso wokuqala wombane elizweni. Oku kuvelisa i-90% yamandla ayifunayo, ii-SME zelizwe zisekwe kutshintsho lweemveliso zezolimo kunye nasekwenzeni iimpahla. Abokugqibela baxhamle isiqinisekiso selizwe sokufumana izibonelelo zoMthetho wokuHluma kwe-Afrika kunye neThuba kurhulumente waseMelika. ILesotho ikwazile ukuvuselelwa nge-100%, ngenxa yombane ophehlwa ngamanzi, kodwa isasokola ngembalela ngala maxesha ithenga amandla kwamanye amazwe angabamelwane. Inkqubo evuselelekayo kufuneka idityaniswe kwaye ikwinkqubo yokusonjululwa.
Amandla kwesi siqithi sincinci kumantla eYurophu asekwe phantse ngokupheleleyo kumandla ahlaziyekayo. Ngo-2011 ilizwe lavelisa i-65 GWh ye amandla aphambili, apho ngaphezulu kwe-85% ivela kwimithombo yamandla ehlaziyekayo yendawo.
Amandla aphuma kumandla eentaba-mlilo abenegalelo kwisibini kwisithathu samandla aphambili, agcwaliswa ngombane nge-19,1% kunye neminye imithombo. Ngo-2013, umbane ovelisiweyo wafikelela kwi-18116 GWh, neveliswayo ngokuqinisekileyo I-100% yamandla ahlaziyekayo "agqithise kuma-99% ngo-1982 kwaye ebephantse ukufana ukusukela ngoko."
Ezona zisetyenziswayo amandla ombane Kukufudumeza kwezakhiwo, nge-45,4% yenkunkuma yonke, kunye nemveliso yombane, ngama-38,8%.
Malunga nezindlu ezingama-85% kweli lizwe bayafudumeza ngala mandla ahlaziyekayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » Amazwe ayi-100% ahlaziyiweyo
Soria, iparadesi ye-biomass